स्मरण: शेरे नेपालको कतार भ्रमण - CivilKhabar
Home›विचार›स्मरण: शेरे नेपालको कतार भ्रमण
करिम बक्स मियाँ/ दोहा।
सन् २०१६ दिसम्वरको ७ देखि १२ सम्म नेपाली आकाशका नक्षत्र हुजुर शेरे नेपालको कतार भ्रमण तय भएको थियो। बरकाती मिशन कतार र रजाए मुस्तफा कतारको संयुक्त तत्वावधानमा हजरतलाई कतार भ्रमण गराउने तयारी भएको थियो।
मुस्लिम संसार आस्थागत विचारका दृस्टिकोणले विभिन्न तप्का (फिरका) मा बिभाजित भएको सन्दर्भले हामीलाई हजरतको कतार भ्रमणमा कुनै प्रतिकुलता पो निम्तिने हो कि भन्ने चिन्ता थियो। हामीले उहाँको भ्रमणको तयारी अत्यन्तै गोप्य तरीकाबाट गरि रहेका थियौं। जसको नेतृत्व बरकाती मिशनका तर्फबाट मुफ्ती नबी बख्श र मौलाना सिराज ज्युले लिनु भएको थियो। हजरतलाई कतार ल्याएर उहाँको अभिभावकत्वमा मुस्लिम समुदायले हर्षोल्लासका साथ मनाउँदै आई रहेको एउटा विषेश पर्व ‘रब्बिउल औवल’ मनाउने हाम्रो योजना सहज भने कदापी थिएन। परदेशको भुमिमा खर्च व्यबस्थापनदेखि कार्यक्रम तर्जुमा सम्मका विविध चुनौतीहरुका विच हामीले हजरतलाई कतार भ्रमण गराई रहेका थियौं।
कतारका विभिन्न स्थानमा तय भएका फरक फरक कार्यक्रमको लागि हामीले सुझबुझका साथ साथिहरुलाई निमन्त्रणा र कार्यक्रम हुनेबारे जानकारी दिई रहेका थियौं। हाम्रो टिम कुनै प्रकारको कमीकजोरी नहोस् भन्नेमा सचेत थियो, तर त्यहि दौरान मेरो कमजोरीले समस्या निम्तिन पुग्यो। हुन त् मेरो कमजोरी मेरो आफ्नो अनविज्ञताको कारणले भएको थियो। मेरो मान्यतामा ‘मस्लक-ए आला हजरत’ का अनुयायी सबै समान हुन् भन्ने ठान्दथे, त्यहि सोचेर मैले सबैलाई हजरतको आगमनको जानकारी दिएँ।
हजरतको कतार भ्रमणका दौरान नै मलाई थाहा भयो एउटा छुट्टै समूहपनि रहेछ जसलाई “जाहीदी समूह” को नामबाट चिनिंदो रहेछ, जुन समूह हजरतका विरोधी हुँदा रहेछन्। मैले उनीहरुलाई मस्लक-ए आला हजरतका अनुयायीको नाताले निम्तो दिनु नै मेरो कमजोरी बन्न पुग्यो।
जाहीदी समुहका एकजना कारिन्दाले मलाई फोन गरे र शेरे नेपालका बारेमा अत्यन्तै तुच्छ शैलीमा प्रस्तूत भए र भने ‘हाम्रा साथिहरुले शेरे नेपाल कतार किन आएको वा ल्याईएको भनेर सम्वन्धित निकायमा उजुरी गर्ने मनशाय भएको’ सुनाएपछी म एकपटक छाँगाबाट खसेजस्तो भएँ। तै आफू सम्हालिएर उनलाई सोधें ‘आखीर उनीहरु किन त्यसो गर्न चाहन्छन् ? के शेरे नेपालको कतार भ्रमण कौमे इस्लाम, मिल्लते इस्लामको खिलाफ छ ?’ उनले लामो कहानी सुनाए। मैले उनलाई त्यसो नगर्न र साथिहरुलाई सम्झाउन आग्रह गरें।
मैले उनलाई बताएँ हामी नेपाली मुस्लीम भएका नाताले मस्लक-ए आला हजरतको विचारधारामा फरक मत राख्नेहरुले समेत हजरतको कतार बसाईंको सफलताको शुभकामना दिई रहँदा एकै मसलक निहित हामी आपसी मतभिन्नताको कारण त्यति भयानक गल्ती गरेमा कसैको लागि राम्रो नहुने भन्दै मैले कुनैपनी हालतमा हाम्रो मिशनमा बाधा नपुर्याउन अनुरोध गरें।
हजरतको कतारको ६ दिने बसाईका दौरान विभिन्न स्थानमा उहाँको साक्षात्कार कार्यक्रमहरु आयोजना भए। मैले यी सबैकुरा आफुमा निहित राखें तर मलाई भित्रभित्रै डर थियो कतै कुनै समस्या आई लाग्ने त होईन? तर अर्को मनले मलाई शान्ती मिल्थ्यो शेरे नेपाल आफैंमा एक महान व्यक्तित्व हुन् र हामीले त्यस्तो डराउनै पर्ने के काम नै गरेका छौं र ? उहाँलाई चाहनेहरुका विचमा हजरतलाई साक्षात्कार गराउनु र उहाँको आशिर्वाद लिनु अपराध होईन भन्ने कुराले मलाई हार्न दिएको थिएन। समग्रमा मेरो त्यो एकहप्ता वेचैनीका साथ बिते। मैले ती कुरा कसैलाई बताईन, किनकी म कसैलाई तनाव दिन चाहँदिन थिएँ। किनकी हामीलाई सफलता पूर्वक हाम्रो मिशनलाई अन्जाम दिनु थियो। अतः कुनै प्रतिकुलता आएन हजरत सफल भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किनु भयो।
अब हजरत भौतिक रुपमा हामी माझ हुनुहुन्न। उहाँले यो सांसारिक यात्रालाई विराम दिनु भएको छ। जब उहाँ अस्वस्थ भएको खबर आयो, अनि उहाँले मृत्युवरण गरेको खबर आए, तिनै तत्वहरुले समाजमा भ्रम फैलाउन थाले। उहाँको जिन्दगीको उत्तरार्द्वसम्म भ्रम छरिरहेका उनीहरुले मृत्युवरण पश्चातसम्म जनमानसमा भ्रम छर्न छोडेनन्। आस्थावानहरुलाई हजरतको आखीरी दर्शन तथा ‘जनाजा’ सम्ममा सरीक नहुन विभिन्न कोणबाट भ्रम छर्ने निम्छरो प्रयाश गरे।
हजरतको आखीरी दर्शन र उहाँको जनाजामा सहभागीहरुको लाखौंको भिंडले सावीत गरिदियो सत्य आखीर सत्य हुन्छ। हजरत शेरे नेपाल जीवन पर्यत्न एउटा अटुट सत्य हुनुहुन्थ्यो र प्रलयसम्म उहाँ सत्य नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँको निधनको शोकमा उपस्थित त्यो विशाल जनसागरले गरेको श्रद्धाञ्जली र अन्तिम विदाईले सावीत गरिदिएको छ कि शेरे नेपाल वास्तव मै एउटा अटुट सत्य र बिस्वासको समग्र रुप हो।
शेरे नेपाल एक शताव्दी पुरुष हुन् भन्ने कुरामा अब कुनै संकोच छैन। उहाँ जस्ता व्यक्तित्वलाई नेपाल भुमिमा हामीले पून: पाउन अब शताव्दी कुर्नु पर्नेछ।
शुरुदेखी नै चितवनको नारायणघाट र कास्कीको पोखरामा उहाँको व्यक्तित्व सम्बन्ध भएपनि बिक्रम सम्वत २०५२ सालमा हुजुर शेरे नेपालले पहाडी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो तबलिक व तहरीकको आरम्भ सम्भवत बागलुङ जिल्लाबाट गर्नुभयो। बागलुङ र त्यस क्षेत्रका मुस्लिम समुदायले उहाँको सत्यात्रालाई घनिभूत रुपमा विशाल जलसा (धार्मिक सम्मेलन) मार्फत भरमग्दुर स्वागत गरे। हजरतको प्रकाशशील यात्राले नेपालको पहाडी क्षेत्रमा तिर्व गति लियो। उहाँको अभिभावकत्वमा क्रमिक रुपमा धार्मिक सम्मेलनहरु आयोजना हुन थाले। पर्वत जिल्लाको कुस्मामा उहाँको उपस्थितिमा दोस्रो विशाल जलसा सम्पन्न भयो। तेस्रो तनहुँको दुलेगौंडामा भयो। एवंरितले तहरीक
एकपछि अर्को हुँदै समग्र पहाडी मुस्लिम समाजमा बिकसित बन्यो। उहाँले इस्लाम जगतलाई अत्यन्तै माया प्रदान गर्नु भयो,यधपी नेपालको पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित मुस्लिम जगतलाई उहाँको विशेष माया थियो,अपनत्व थियो।
उहाँको व्यक्तित्वले यतिविघ्न प्रभावित गर्यो कि समग्र पहाडी मुस्लिम समुदाय हजरत शेरे नेपालको शतप्रतिशत अनुयायी बन्न पुगे। उहाँले शिक्षा दिएका उहाँका बिधार्थीहरुले सिंगो पहाडमा इस्लामीक शिक्षा प्रदान गर्न थाले। अपवादलाई छोडेर उहाँबाट दीक्षित उलमाहरुले यो क्षेत्रका मदर्शाहरुलाई आवाद गरेका छन्। सिंगो पहाडी क्षेत्रमा इस्लामको प्रारम्भिक ज्ञान कसैको देन हो भने केवल उहाँको देन हो। समग्र देशमा त उहाँको देन छ नै; इस्लामिक शिक्षामा अत्यन्तै कमजोर देखिएको पहाडी क्षेत्रमा आज दर्जनौं स्थानीय आलीम, हाफीज र मुफ्तीए किराम सम्म आज हाम्रो समुदायले पाएको छ।
मस्लक-ए आला हजरत विचारधाराबाट म आफुलाई जति गौरवान्वित महसुस गर्छु त्यतै नै मलाई शेरे नेपालको शिष्य हुनुमा गर्व छ।
शान्ति र सादगीका खानी पीर-ए तरीकत हजुर मुफ्ती-ए आजमा नेपाल वुलन्दी युगयुग कायम रहोस् ! “आमीन”
महिलाले सहनु पर्छ भन्ने मानसिकताबाट समाज बाहिर आउनुपर्छ
प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च : २ लाख ५४ हजार